RW shirdoon tacsida Xildhibaan Xasan Cali u diray ehelada, xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed – Radio Daljir
RW shirdoon tacsida Xildhibaan Xasan Cali u diray ehelada, xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed
Diseembar 19, 2013 1:58 b 0
Muqdisho, December 19, 2013 – Ra?isal wasaaraha KMG ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa tacsi u diray ehelada Xildhibaan Xasan Muxamed Cali, kaas oo xalay u geeryooday xanuun hayey oo uu u jiifay hoteelka Muna ee Muqdisho.
Qoraal tacsi ah oo ka soo baxday xafiiska ra?isal wasaaraha dalka ayaa la gaarsiiyey gudoonka baarlamanka iyo guud ahaan gollaha shacabka.
Ra?isal wasaare Shirdoon ayaa xildhibaanka ku tilmaamay shaqsi ay si wayn uga go?nayd u adeegida dadka iyo dalka.
Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari iyo madaxweyne Xasan sheikh ayaa iyana tacsi u diray ehelada, qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee xildhibaanku ka geeryooday.
Kooxda Al-shabaab oo faragelinaysa dagaalada beelaha ku salaysan ee ka socda shabeelaha hoose
Baahin: Arbaca, 18 Dec 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Garoowe